तक्मे कथा–‘रमेश खरेलले ‘एक्स– लाहुरे’ ठान्नुभएछ’ – manoranjansansar.com | A Entertainment News portal for all
तक्मे कथा–‘रमेश खरेलले ‘एक्स– लाहुरे’ ठान्नुभएछ’
बालकलाकार, तेस्रो लिंगी, कोरियन फर्सी, तक्मे बुढा हुँदै विल्सनविक्रम राई फिल्म ‘प्रोड्युसर’मार्फत ‘पप्पु प्रोडक्सन’का रूपमा देखिएका छन् । जुनसुकै पात्रमा आफूलाई दुरुस्त उतार्ने विल्सनभन्दा उनका पात्र सेलिब्रिटी छन् । धनबहादुर खड्कासँग उनले आफ्ना अनुभव बाँडेका छन् ।
माग्ने होइन, दिने बूढा
मलाई तस्रोेलिंगीको भूमिका गर्दागर्दा उनीहरूको बोलाइ र हिँडाइमा बानी पर्न थालेको थियो । धेरैतिरबाट मलाई त्यही हो कि भनेर कुरा आउँथ्यो । यसलाई चाहिँ मेरो कामको प्रभावका रूपमा लिएको थिएँ । कहिलेकाहीँ ‘म त्यस्तै हो कि क्या हो’ भन्ने पनि लाग्थ्यो । त्यसैले योभन्दा फरक र बढी गर्न पाए भन्ने लागेको थियो । एक किसिमले ‘फ्रस्टे«टेड’ पनि भइसकेको थिएँ । ‘सायद’ फिल्म खेलेको थिएँ, तर रिलिज भएको थिएन । स्टेज कार्यक्रमका क्रममा ‘मेरी बास्सै’ का केदार घिमिरे (माग्ने बूढा) सँग भेट भयो । उहाँलाई ‘म पनि केही गर्छु’ भनेँ । उहाँले के–के गर्नहुन्छ भनेर सोध्नुभयो । त्यो मध्ये ‘तक्मेबूढा’ लगायत अरू तीन पात्रको अभिनय गरेको थिएँ । काम माग्नका लागि धेरैलाई यसरी सुनाइसकेको थिएँ । सुनेको नसुन्यै गर्थे । तर, उहाँ काम दिन तयार हुनुभयो । ‘एक्स–लाहुरे’ तक्मेबूढाको कथा र बोल्ने तरिका मैले सुनाएको थिएँ, बाँकी उहाँले नै सिर्जना गर्नुभयो । त्यही पात्रका कारण मेरो अभिनय करिअरको कायापलट भयो । उहाँलाई अरू ‘माग्ने बूढा’ भन्छन्, मेरा लागि चाहिँ उहाँ ‘दिने बूढा’ हो ।
‘मेरी बास्सै’मा तक्मेबूढा भएर अभिनय गर्न थालेको केही समय भएको थियो । धेरैलाई त्यो पात्र मन परेको थियो । धेरै जनाले ‘एक्स– लाहुरे’ नै सिरियलमा देखिएको होला भन्ने ठान्थे । एसएसपी रमेश खरेलले पनि त्यस्तै भन्ठान्नुभएछ । उहाँले ‘दिने बूढा’सँग मेरो नम्बर माग्दै भन्नुभएछ, ‘ती लाहुरे बूढासँग बोल्नुप¥यो ।’ उहाँ त बूढो होइन, तन्नेरी हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले छक्कै पर्दै भन्नुभएछ, ‘हो र, ब्रिटिस लाहुरेको रिटायर्ड होइन ?’ ‘दिने बूढा’ले ‘रिटायर्ड होइन, भर्खर भर्ती लाग्ने बेला चाहिँ भएको छ’ भनेपछि उहाँ बेस्सरी हाँस्नुभएछ । पछि मलाई फोन गरेर बधाइ दिनुभयो, ‘फ्यान भएँ’ भन्नुभयो ।
कोरियामा ‘बूढो खोइ ?’
लोडसेडिङका कारण नेपालमा भन्दा पहिले विदेशमा हिट भएको रहेछु । त्यसैले पत्रपत्रिकामा म युवा नै छु भन्ने आएको थिएन । तक्मेबूढा हिट भएपछि कार्यक्रमका लागि कोरिया बोलाए । एयरपोर्टमा आयोजक मलाई पर्खिरहेका थिए । जोसँग मेरो पहिले कुरा भएको थियो, उहाँले मलाई चिनेर खादा लगाएर म अगाडि बढिसकेँ । उहाँसँग आएका अरू भने खादा र पुष्पगुच्छाका साथ तक्मेलाई कुरिरहेका छन् । सबै आर्टिस्ट आइसकेर तक्मे नदेखेपछि एक जनाले मुखै फोर्नुभयो, ‘तक्मेबूढा त आएनन् नि ।’ अर्काेले मलाई देखाएर ‘उहाँ त हो नि’ भन्नुभयो । उहाँले तलदेखि माथिसम्म हेर्नुभयो र भन्नुभयो, ‘होइन होला । तपाईंको उमेर कति ?’ कार्यक्रम नहुञ्जेल उहाँले तक्मेका नाममा अर्कै आएको ठान्नुभएछ ।
म बिहे नै नगरेको लक्काजवान । तर, हङकङमा तक्मेबूढाका नातिनातिना रहेछन् । कुरा सन् २०१२ मा हङकङ जाँदाखेरिको हो । त्यहाँ तक्मेबूढासँग फोटो खिच्नेको ठूलै भीड थियो । कार्यक्रममा धेरै दर्शक भएकाले भीड नियन्त्रणका लागि सिभिल सेक्युरिटी हायर गरिएको थियो । हामीसम्म आइपुग्न आयोजकबाहेक कसैले पाएका थिएनन् । मेकअप रुममा बसिरहेको थिएँ, एक जना महिला र दुई बच्चा पछाडिपट्टि आए । म तक्मेबूढाकै लुगामा थिएँ । राई–लिम्बूको कल्चरअनुसार उपहार राखेर खुट्टामै ढोगे । कुरा के रहेछ भने उनीहरूका हजुरबा ब्रिटिस लाहुरेका रहेछन्, उनीहरू नजन्मिँदै बितेका रहेछन् । तर, ती लाहुरेका तस्बिरचाहिँ टीभीमाथि राखिएको रहेछ, म टीभीमा देखेपछि उनीहरू हजुरबा चाहिँ नेपालमा छन् भन्ने ठान्दा रहेछन् । त्यही कारण मलाई भेट्न हङकङको त्यत्रो बिल्डिङमा सिँढी चढेरै आए ।
स्टेज कार्यक्रममा जहिले पनि म दुई चोटि चढ्छु । पहिले तक्मेबूढा भएर, त्यसपछि विल्सनविक्रम राई भएर । तक्मेका रूपमा कार्यक्रम गर्दा भन्ने गर्छु, ‘ एकछिनपछि मेरो नाति विल्सनविक्रम राई आउँदै है ।’ यूकेमा कार्यक्रम गर्दाको कुरा हो । मैले दुवै जनाको भूमिकामा दर्शक हँसाएँ । कार्यक्रम सकिएपछि तक्मे बूढासँग तस्बिर खिचाउनेको लाइन लाग्यो । तर, मैले त्यो लुगा फुकालिसकेको थिएँ । त्यसै बीचमा एक जना हजुरआमा आएर सोध्नुभयो, ‘बाबु खै त तक्मे बुढा ?’ मैले जिस्किएर ‘झोलामा हुनुहुन्छ’ भनेको उहाँले सही मानेर ‘बाजेले गर्दा संसार घुम्न पाउनुभएको छ । अनुहार मिल्दो पनि रहेछ, छोरीपट्टिकै होइन ? बुढो मान्छेलाई झोलामा राख्ने हो ? राम्रो ख्याल गर्नू’ भन्दै सम्झाउनुभयो ।
सलमानले खोले नेपालमा बिइङ् हुमन